အချို့သော rotary tools များ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / Rotary Tools အချို့ကိုအသုံးပြုသည်
Rotary Tools အချို့ကိုအသုံးပြုသည်
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-03-30 မူလ:ဆိုက်ကို
ROtary ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကိုမော်ဒယ်သည် Torque ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောမြန်နှုန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သငျသညျသတ္တု, ပလပ်စတစ်, ဖန်, ဖန်, အီလက်ထရောနစ်နှင့်သစ်သားကဲ့သို့သော, သင်အသုံးပြုနိုင်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောRotary Tool။ rotaမှီခိုကိရိယာများသည်အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာစီမံကိန်းများနှင့်အိမ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာ၌ကောင်းမွန်သောအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အတွက်ဖြစ်သည်.
1 ။တစ် ဦး ထက်မြက်cလုံးsaw
သင်လွှမ်းလျှင် တစ် ဦး နှင့်အတူသွားRotary Saw Blade၎င်းသည်အချိန်နှင့်ခွန်အားကိုသက်သာစေလိမ့်မည်။ ကွင်းဆက်ချွန်ထက်သောကွင်းဆက်သည်ကြိတ်ခွဲရန်နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုချိန်ညှိရန်လမ်းညွှန်ကိုပေးသည်။ အဆိုပါလွှကိုထက်မြက်သောအခါ တစ် ဦး rota နှင့်အတူသွားမှီခိုကိရိယာ,သင် ... ရမည်လိုအပ်သောဘေးကင်းလုံခြုံမှုအစီအမံယူပါ။
လူများသည်မီးဖိုချောင်သို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းထိန်းသိမ်းခြင်းကိုမကြာခဏစိုးရိမ်ကြသည်, သို့သော်ပညာရှင်များသည်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. ဤပြ problems နာများကိုသက်သာစေရန်လျှို့ဝှက်ချက်များရှိသည်Mini Rotary Toolfaucet အဖုံး၏ဘေးထွက်ကိုဖြတ်တောက်ရန်သင်ဖြတ်တောက်ခြင်းဘီးကိုသုံးနိုင်သည်, အစားထိုးမည့်ပလတ်စတစ်တံဆိပ်ကိုမစိုးရိမ်ပါနှင့်,.
သင် s ကိုနိုင်တစ် ဦး ကိုအသုံးပြု။ သပိတ်ပြား၏အတွင်းပိုင်းကိုချွတ်ရှိသည်Rotary Power Toolသတ္တု - ဖြတ်တောက်ခြင်း carbide bit နှင့်အတူတွဲဖက်။ပထမ ဦး စွာထုတ်ယူပါသေးငယ်တဲ့ပမာဏနှင့်ထို့နောက်တံခါးကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာတံခါးကိုပိတ်ပစ်ခြင်းဖြင့်တံခါးကျင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါ။ဆက်လက်ပြန်လည်အမြှတံခါးခုံများဖမ်းမိသည်အထိသတ္တုပမာဏသင့်လျော်သောသတ္တုပမာဏ။
ဘယ်အချိန်မှာရင်ဆိုင်ရသောအခါချွတ်ခေါင်းများနှင့်အတူ screw နှစ်ခုသင်လုပ်နိုင်တယ်ဒီအစွန်အဖျား ry ။ ပထမ ဦး စွာ, အပေါ်ဖြတ်တောက်လက်စွပ်ကို install လုပ်ပါRotary broacing ကိရိယာများဘီးကိုအပိုင်းအစသတ္တုတစ်ရွက်ဖြင့်ဘီးကိုကြိတ်ဆုံပါ။ ၎င်းသည်ဘီးအ0န်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ အခြား screw နှစ်ခုကိုမထိခိုက်စေဘဲဝက်အူခေါင်းကိုဖြတ်ရန်ဘီး၏အရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်ပါ။ ထို့နောက်ကြိတ်ဆုံကြိတ်ဖဲဝက်အူခေါင်း၌, ထို့နောက်သင်တစ် ဦး ကဝက်အူလှည့်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စွဲစေ unsertens နိုင်ပါတယ်။
5 ။သန့်ရှင်းminisကပ်လျက်dတစ် ဦး နှင့်အတူရမ်eခေြာက်သူ
သင်မကြာခဏသဲကိုသုံးလျှင်ingစည်Mini Rootary Tools actesies, သဲingသင့်ရဲ့ rota ၏စည်မှီခိုအချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ tool ကိုပိတ်ဆို့လိမ့်မည်, သို့သော်သဲ၏မျက်နှာပြင်ကိုသင်သန့်ရှင်းစေနိုင်သည်ingရော်ဘာရော်ဘာခဲယဉ်းပါ။လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးကိရိယာများလှည့်နှင့်အနိမ့်မြန်နှုန်းမှာလှည့်, ထို့နောက်ဖျက်ပစ်အနက်ရောင်အမှိုက်များကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်အောင်ခဲတံကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်.
6 ။ဖြတ်ခြင်းcurves အတွက်tကေြွ
သငျသညျကြွေကြွေပြားများပေါ်တွင်အချို့သောခါးဆို့သို့မဟုတ်ပုံစံများကိုဖြတ်ချင်လျှင်, သင်တစ် ဦး ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်Rotary tool ကိုချိန်ညှိကြွေကြွေပြားဖြတ်တောက်ခြင်းအနေအထားအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ။ လေ့ကျင့်ခန်းအတိမ်အနက်ကို 1/4 လက်မ 1 မှ 1 လက်မအထိသတ်မှတ်ပြီးနောက်ပထမ ဦး ဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်သင်ပြင်ဆင်သင့်သည်။ သင်ထပ်မံဖြတ်ချင်လျှင်, သင်သည်ယခင်အခြေခံအရည်အသွေး 1/4 လက်မအားဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအနက်ကိုတိုးပွားစေသင့်သည်။
Rotaryကိရိယာများကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်, သငျသညျလောကသို့ရရန်စိတ်ဝင်စားလျှင်လျှပ်စစ် rotary ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာsသို့သော်မည်သည့်နေရာတွင်စရမည်ကိုမသေချာပါ, သင့်အားပြီးပြည့်စုံသောတံခါးပေါက် Tool ကိုမိတ်ဆက်ပေးကြစို့။မစ်ကြီး.
Rotary ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကို အရည်အသွေးမြင့် rotary tool ကို Rotary Saw Blade Mini Rotary Tool Rotary Power Tool Rotary broacing ကိရိယာများ Mini Rootary Tools actesies လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးကိရိယာများလှည့် Rotary tool ကိုချိန်ညှိ လျှပ်စစ် rotary ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာ